Tag: dhismaha kooxda | Martech Zone
Tag: dhismaha kooxda
Qaybta koowaad (Waxaad u Baahan Tahay Khabiir Suuqgeynta Emailka Haddii ...) waxaan ka wada hadalnay goorta iyo sababta ay u noqon karto fikrad wanaagsan in qandaraas lala galo khabiiro leh, khibrad u leh, iimaylka suuqgeynta iimaylka. Hadda waxaan soo bandhigi doonaa mabaadi'da hagitaan ee la tixgelinayo ka hor inta aan la shaqaaleysiin wakaaladda suuqgeynta iimaylka, la taliyaha suuqgeynta iimaylka ama maareeyaha suuqgeynta iimaylka gudaha.
Haddii aad tahay xayeysiis leh, ama qorsheynaya, inaad ku darto emaylka 3-aad e-maylkaaga isku-darka suuqgeynta boostadani waxay kaa caawin doontaa inaad u adeegsato kanaalka suuqgeynta iimaylka si guul leh oo aad u hesho ROI ka wanaagsan, oo leh miisaaniyado yar. Dhamaadka, waxay kaa caawin doontaa liistada liisaska, sidoo kale. Ka dib dhan xayeysiiyaha faraxsan waa xayeysiiyaha soo noqnoqda.